Abalawuli beepropathi kwi-RealtyWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Isiqondisi seArhente yeZindlu Abaphathi beepropathi
Ulawulo lwepropathi lukaKaty lube ngabaphathi bepropathi ekhethiweyo yeHouston ngaphezulu kweminyaka ye-30! Ukubandakanya ulawulo lwepropathi yokuhlala kunye nentengiso, ulawulo lwepropathi yeholide, abaphathi bepropathi yeikhondomu, ukuqokelela irente, ukugcinwa kwepropathi, iinkonzo zonxibelelwano kunye nokuhlala.
Katy eTexas (eUnited States), 77450
E papashwe ngu Ulawulo lwepropathi kaKaty
umbono Abaphathi beepropathi ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
A umphathi wepropathi okanye umphathi wezindlu ngumntu okanye inkampani ethe yabizwa ngokuqhuba ipropathi yearhente yokuhlawula ngerhafu, xa umniniyo engakwazi ukubakho kwezo nkcukacha, okanye engenamdla wakwenza oko. Ipropathi inokuba yeyomntu ngamnye okanye inokuba yeyomnini phantsi kwesihloko secandelo, inkampani yebhlokhi yokwabelana kwaye ingabhaliswa ukuba ibe yindawo yokuhlala, iofisi yokuthengisa kunye nokuthengisa okanye ukuthengisa. Imisebenzi eqhelekileyo elindelekileyo kumphathi wepropathi ibandakanya ukufumana / ukukhupha kunye nokusebenza ngokubanzi nabaqeshi kunye nokulungelelanisa neminqweno yomnini. La malungiselelo anokufuna ukuba umphathi wepropathi aqokelele irente, kwaye ahlawule iindleko ezifanelekileyo kunye nerhafu, enze iingxelo zethutyana kumniniyo, okanye umnini unokuhambisa imisebenzi ethile aze aqhubane nabanye ngqo. Umphathi wepropathi unakho ukulungiselela iinkonzo ezahlukeneyo, njengoko unokucelwa ngumnini wepropathi, ukuba ahlawule. Apho indawo yokuhlala (ikhaya leholide, ikhaya lesibini) kuhlala abantu ngamaxesha athile, umphathi wepropathi unokwenza ilungiselelo lokujonga ukhuseleko okuphezulu, ukuhlala endlini, ukuhambisa nokuthumela iimpahla, kunye nezinye izivumelwano zangaphantsi zepropathi eyimfuneko yokwenza umhlaba ulunge xa ​​umniniwo uhlala kwindawo yokuhlala (izixhobo zokusebenza, iinkqubo ezisebenzayo, unikezo kunye nabasebenzi abasesandleni, njl. njl.). Ulawulo lwepropathi lungabandakanya iipropathi zorhwebo apho umphathi wepropathi enokuqhuba ishishini, kunye nokulawula ipropathi. Eminye imimandla inokufuna ukuba umphathi wepropathi abe anelayisensi yomsebenzi. Umphathi wepropathi unoxanduva oluphambili kumqeshi womhlaba kunye noxanduva lwesibini kwiarhente. Ubudlelwane umphathi nomphathi wepropathi kunye nomqeshisi kunye nomqeshi bubalulekile ekwakheni izinto ezilindelweyo kuwo omabini amaqela kwisivumelwano kuba omabini amaqela aza kufuna kwaye alindele amalungelo athile kunye nezibonelelo zazo.